शशांक र निधिलाई सिटौलाको घोचपेच- म त झापा बसेर काठमाडौंको राजनीति बुझ्नै नसक्ने भइसकें :: Setopati
शशांक र निधिलाई सिटौलाको घोचपेच- म त झापा बसेर काठमाडौंको राजनीति बुझ्नै नसक्ने भइसकें
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, भदौ १९
नेपाली कांग्रेसमा भिन्न गुट चलाइरहेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री शशांक कोइरालालाई हाँसीहाँसी रोचक प्रश्न सोधेका छन्।
कोइरालालाई प्रश्न गर्दै सिटौलाले भने, ‘शेरबहादुरजी र शशांकजी ठ्याक्कै मिलेको हो? कि होइन? गन्जागोल कुरा आइरहेका छन्।’
सिटौला यतिमा रोकिएनन्। लगत्तै उपसभापति निधिलाई पनि उस्तै खाले प्रश्न सोधे, ‘सभापतिमा उठ्ने निधिको पनि चर्चा सुन्छु, के हो? प्रष्टाइदिनुभयो भने मैले पनि आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ।’
कोरोना महामारीले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर कार्यक्रम गर्ने अवस्था हिजोआज छैन। १४ औं महाधिवेशन नजिकिएका बेला कांग्रेसका नेताहरूले जुम मिटिङबाट आफ्ना कुरा राखिरहेका हुन्छन्।
बिहीबार यस्तै एउटा भर्चुअल माध्यमबाट अन्तर्क्रियाको मेसो जिपी कोइराला लोकतन्त्र सम्वर्द्धन केन्द्रका बलदेव तिमल्सिनाले जुराएका थिए।
करिब चार सय जना नेता/कार्यकर्ता सहभागी उक्त अन्तर्क्रियामा उपसभापति निधि, महामन्त्री कोइराला, पूर्वमहामन्त्री सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, डिला संग्रौला र प्रदीप पौडेललगायत वक्ता थिए।
मुख्य विषयवस्तु थियो- फागुनमा कांग्रेसको १४ औं अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन?, हुन्छ भने कसरी सम्भव छ?
उक्त विषयमा केन्द्रीत रहेका नेताहरूले कोरोना महामारी र क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका काम नसकिएकोले फागुनमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए।
आफू झापास्थित घरबाट कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको उल्लेख गर्दै पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले केही दिनमा काठमाडौं आउने तयारी सुनाए। काठमाडौंमा कांग्रेसका सभापतिसहित पदाधिकारीहरू घरबाहिर ननिस्केको र महाधिवेशनको तयारी जुन रफ्तारका साथ हुनुपर्ने केन्द्रीय कार्यालयबाट त्यसो नभएकोले बैठक गर्न आफू काठमाडौं आउने सिटौलाको भनाइ थियो।
महाधिवेशन कहिले गर्ने, कसरी गर्ने टुंगो नभएका बेला उम्मेदवारी घोषणा भइरहेका र गोप्य बैठकहरू हुने गरेका खबरहरू आफूले अनलाइनहरूमा पढिरहेको सिटौलाको भनाइ थियो।
‘अहिले केही अनलाइन हेरिरहेको छु। अनेकौं ठाउँमा गोप्य मिटिङ भन्ने सुनेको छ। यसबारे तपाईंहरू (महामन्त्री कोइराला) खण्डन पनि गर्नुहुन्न,’ सिटौलाले भने, ‘शेरबहादुरजी र शशांकजी ठ्याक्कै मिलेको हो? कि होइन, क्या हो कुन्नि। गन्जागोल भएर कुरा आइरहेका छन्।’
उनले थपे, ‘निधिको पनि चर्चा व्यापक सुन्छु सभापतिमा उठ्ने खालको। यो के हो के भइरहेको हो? म झापा बसेर बुझ्नै नसक्ने भइसकें। प्रेसमा आएका कुरा ठिक/बेठिक के हुन् भनिदिनुपर्छ।’
केही दिनअघि देउवा र कोइराला सांसद विनोद चौधरीको होटलमा भेट भएर कुराकानी गरेकोबारे समाचार आएका थिए। उक्त समाचार पढेर सिटौलाले कोइरालालाई प्रश्न गरेका हुन्।
सिटौलाको प्रश्नको जवाफ दिँदै महामन्त्री कोइरालाले सभापति देउवासँग हिजोआज भेट नभएको बताए।
‘मेरो र शेरबहादुरजीको बीचमा कुनै होटलमा वार्ता भएको भन्ने पटक्कै होइन,’ कोइरालाले भने, ‘म घरको घर बसिरहेको छु। डेढ महिना भइसक्यो देउवासँग नभेटेको।’
सभापतिले पार्टीका गतिविधिबारे छलफल गर्न बोलाएका बेला केही समयअगाडि भेट भए पनि हिजोआज भेट नभएको कोइरालाले बताए।
उपसभापति निधिले भने सिटौलाको प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर दिएनन्। यतिमात्रै भने- १४ औं महाधिवेशन सहमतिसाथ गरौं। जसको नाममा सहमति हुन्छ अरूले उसलाई स्वीकारौं। यो सम्भव छ।
निधिले आफूबारेका टिकाटिप्पणीबारे थप समय खर्च नगर्ने पनि बताएका थिए। सहमतिबाट नेतृत्व चयन गरे पार्टीभित्रको गुट सकिने र आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन सकिने तर्क निधिले अगाडि सारेका छन्।
महाधिवेशन आउन छ महिनामात्र बाँकी रहेका बेला कांग्रेसभित्र फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिन्न, विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।
पहिलेजस्तो देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेला भएर महाधिवेशन गर्ने स्थिति कोरोना महामारीले गर्दा सम्भव नभएकोले नयाँ तरिकाबाट महाधिवेशन गर्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन्।
महाधिवेशनबारे कसले के भने?
१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ। महाधिवेशनका कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेपछि पनि सभापतिले विभिन्न विभागलगायतमा मनोनयन गरिरहने? यो कति पारदर्शी हुन्छ?
क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम साउनभित्र सक्ने भन्ने कार्यतालिकामा छ। तर कोरोनाले गर्दा भएको छैन। यसबीचमा दशैं, तिहार, छठलगायत छ। त्यसैले क्रियाशील वितरणकै अवधि कात्तिक मसान्तसम्म पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ।
महाधिवेशन कसरी गर्नेभन्दा पनि नेतृत्वकै लागि झिनाझम्टी देखिएको छ। आफ्नो उम्मेदवारी पुष्टि गर्न मार्गचित्र पनि प्रस्तुत नगरी एक दर्जन नेताहरूले सभापतिमा उम्मेदवारीका कुरा बाहिर ल्याउनुभएको छ।
महाधिवेशन फागुनमा हुने स्थिति छैन। तर धेरै पछाडि पनि धकेल्न हुन्न। फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने समय हुँदैन।
निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ। कोरोनाभाइरस संक्रमणले गर्दा पनि कतिपय कामहरू हुन सकेका छैनन्।
कांग्रेसमा रूपान्तरण जरूरी छ त्यसका लागि पनि महाधिवेशन छिटो हुनुपर्छ। हामी कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैनौं। साउनभित्र क्रियाशील सदस्यता दिने र नवीकरणका काम सक्ने भन्ने थियो तर सकिएन।
क्रियाशील सदस्यता वितरणमै पारदर्शीता हुन्न कि भन्ने पनि चिन्ता देखिएका छन्। यस्तो अविश्वास हटाउनु पर्छ। पार्टीभित्र देखिएका किचलो समाधान गर्नुपर्छ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका पुरै प्रभावित भइसकेको छ। फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना देख्न छाडेको छु मैले। केन्द्रीय कार्यालयबाट महाधिवेशनको तयारी देखिएन।
कतिपय जिल्लामा क्रियाशील फारम नै पुगेको छैन। महाधिवेशन गराउन केन्द्र तप्पर छ भन्ने नै विश्वास लाग्न छाडेको छ।
केन्द्रीय पदाधिकारी महाधिवेशन तयारीमा जुट्नुभएकै छैन। जुट्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ।
फागुनमा नभएर छ महिना थप्ने हो भने भदौमा महाधिवेशन होला। जो नेतृत्वमा आए पनि स्थानीय निर्वाचन तयारीका लागि समय हुँदैन त्यसले पार्टीलाई नै असर गर्छ। त्यसैले समयमै महाधिवेशन गर्नेतिर लागौं।
कोरोना सकिएपछि महाधिवेशन गर्ने हो भने कहिले हो कहिले? एक दुई वर्ष लाग्ला। ढुक्कसँग दुई चार वर्ष बसे हुन्छ। तर त्यसो गर्नु हुन्न। महाधिवेशन गर्ने तयारीमा पदाधिकारी साथीहरू लागिदिनुस्।
महाधिवेशन गराउने जिम्मा सभापतिसहित केन्द्रीय समितिको हो। समयमै महाधिवेशन गराउनुपर्छ। कोरोना महामारी छ त्यसैले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेला भएर महाधिवेशन गर्न अब सम्भव नहुन पनि सक्ला।
अधिवेशन गर्ने तरिका हामीले बदल्नुपर्छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तो १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यबाट नयाँ महाधिवेशन गर्न हुन्न। यसबीचमा धेरै पार्टी कांग्रेससँग मिलेका छन् उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्‍यो।
फागुनमा महाधिवेशन अब सम्भव देखिएन। तर छिटै महाधिवेशन गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने भन्ने केन्द्रीय समितिमा छलफल गरौं।
फागुन ७ मा महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना धेरै कम देखेको छु। भरसक त फागुनमै गरौं भन्ने हो। तर नसके जेठसम्म भने पनि गर्नुपर्छ। जति ढिला गर्‍यो, उति वैधानिकताको प्रश्न पनि आउँछ।
कोरोनाले गर्दा महाधिवेशन गर्न गाह्रो भइरहेको हो। १५ जिल्लामा समायोजन सकिएको छैन। क्रियाशील सदस्यको काम भइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी महाधिवेशन गर्न सकिएला? कोरोनाले सभापतिको पनि हात बाँधिएको छ, कोरोना महामारीमा कसरी महाधिवेशन गर्ने विकल्पहरू हेर्नुपर्छ।
अब कोरोनालाई साथी बनाउँदै जीवन निर्वाह गर्न सिक्नुपर्छ। कोरोनाले गर्दा पनि महाधिवेशनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
भीडभाड गरेर काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न अब गाह्रो हुन्छ। बारको चुनावजस्तै गरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा पनि चुनाव गराउन सकिन्छ।
सबैको मनस्थिति फागुनमा हुन सक्दैन भन्नेमा छ। जेठभन्दा पर लैजान मिल्दैन। छ महिना थप गर्दा भदौ ३० गतेसम्म कार्यकाल त हुन्छ तर ढिला गर्नु हुन्न। राजनीतिक र वैधानिक संकट देखा पर्न सक्छ।